Solarcaine Aloe Extra Burn Relief - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Solarcaine Aloe Extra Burn Relief
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ကဘာလဲ။
Generic Name: Solarcaine Aloe Extra Burn Relief Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နေလောင်ခြင်း၊ပိုးကောင်ကိုက်ခြင်း၊poison ivy, poison oak နဲ့ poison sumac တို့ကဲ့သို့သောအဆိပ်ရှိအပင်တွေနဲ့ထိတွေ့မိခြင်း၊သာမန်ထိခိုက်ရှနာဒါဏ်ရာရခြင်း၊အကုတ်လွန်ပြီးလက်သည်းပူလောင်ခြင်း၊အပူလောင်ခြင်းအစရှိသောအရေပြားပြဿနာတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့နီရဲယားယံနာကျင်မှုတွေကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စအိုဝယားယံနာကျင်၊မအီမသာဖြစ်ခြင်းတွေကိုကုသဖို့အတွက်လည်းLidocaineအရေပြားလိမ်းဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Lidocaineလိမ်းဆေးကိုအခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသုံးစွဲပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်ပိုမိုသုံးစွဲတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။Lidocaineလိမ်းဆေးကိုလွဲမှားစွာအသုံးပြုမိရင်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။Lidocaineလိမ်းဆေးကိုဂျဲလ်၊စပရေးဖြန်းဆေး၊ခရင်မ်လိမ်းဆေး၊လိုးရှင်းလိမ်းဆေး၊အရည်ပုံစံ၊အရေပြားမှာကပ်တဲ့အပြားပုံစံစသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုလုံးဝမသောက်ရပါဘူး။Lidocaineလိမ်းဆေးကိုအရေပြားပေါ်မှာသာအသုံးပြုရပါမယ်။ မျက်စိ၊နှာခေါင်း၊စအိုအတွင်းပိုင်း၊ယောနိအတွင်းပိုင်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆေးထိတွေ့မိရင်ရေနဲ့အမြန်ဆေးပစ်ရပါမယ်။
သင့်အရေပြားကိုထုံသွားစေဖို့ဒါမှမဟုတ်အနာသက်သာစေဖို့အတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ဆေးပမာဏကိုပဲသုံးစွဲရပါမယ်။ တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ဆေးပမာဏအများအပြားအသုံးပြုမယ်၊အရေပြားနေရာအနှံ့အပြားမှာအသုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးလိမ်းထားတဲ့အရေပြားနေရာပေါ်မှာပတ်တီးစည်းတာ၊အပူတခုခုကပ်တာ၊ပလတ်စတစ်စကပ်တာမျိုးလုပ်မိမယ်ဆိုရင်သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲကိုဆေးပမာဏအများအပြားစုပ်ယူရောက်ရှိသွားမှာပါ။ ထိခိုက်ရှနာဒါဏ်ရာရှိနေတဲ့အရေပြားဟာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အရေပြားထက်ဆေးစုပ်ယူမှုပိုများပါတယ်။
ရောင်ရမ်းနေတဲ့အရေပြားနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ဒါဏ်ရာနက်နက်ရထားတဲ့နေရာတွေကိုဒီဆေးမလိမ်းပါနဲ့။ အသားနီလန်နေတဲ့နေရာတွေ၊အပူလောင်/မီးလောင်ဒါဏ်ရာခပ်ပြင်းပြင်းရထားလို့အရည်ကြည်ဖု ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ၊ပွန်းရှနေတဲ့နေရာတွေမှာဒီဆေးကိုအသုံးမပြုရပါဘူး။ ဆေးလိမ်းထားတဲ့နေရာကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တစုံတရာမရှိဘဲအုပ်ထား၊ကာထားခြင်းမပြုရပါဘူး။Lidocaineလိမ်းဆေးကိုလိမ်းတဲ့အခါလက်ချောင်းထိပ်လေးတွေနဲ့လိမ်းပေးနိုင်သလိုဂွမ်းစလေးနဲ့တို့ပြီးတော့လည်းလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ဆေးညွှန်းပါလာရင်ဆေးညွှန်းကိုအသေအချာဖတ်ပြီးတိတိကျကျလိုက်နာပါ။ မရှင်းလင်းတာတွေရှိရင်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။ အသုံးပြုပြီးသားဒါမှမဟုတ်အသုံးမပြုရသေးတဲ့ဆေးတွေကိုကလေးတွေ/အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့lidocaineအရေပြားကပ်ခွာမှာပါဝင်တဲ့ဆေးပမာဏဟာ (မတော်တဆ မြိုချမိရင်၊စုပ်မိရင်) ကလေးတွေအတွက်ရောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိလို့ပါပဲ။ ဒါမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုအမြန်ဆုံးခံယူရပါမယ်။
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ medication ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်အခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
နာကျင်မှုကိုထုံထိုင်းသွားစေတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးစွဲတဲ့အခါဆရာဝန်ရဲ့ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုမရှိဘူးဆိုရင် (ဥပမာလေဆာအသုံးပြုပြီးအမွှေးအမျှင်တွေဖယ်ရှားခြင်း) ဆေးလွန်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် mammography လို့ခေါ်တဲ့ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါနာကျင်မှုကိုထုံထိုင်းသွားစေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုရင်လည်းဆေးလွန်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အလှအပဆိုင်ရာကုသမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါသတိကြီးကြီးထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးနဲ့မတော်တဆထိမိတဲ့နေရာတွေမှာထုံထုံကြီး ဖြစ်နေခြင်းစတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Solarcaine Aloe Extra Burn Relief နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Solarcaine Aloe Extra Burn Relief နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Solarcaine Aloe Extra Burn Relief နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက်သောက်သုံးရန်စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
Solarcaine Aloe Extra Burn Relief ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief ကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief. https://www.drugs.com/mtm/solarcaine-aloe-extra-burn-relief.html. Accessed November 15, 2017
Solarcaine® Aloe Extra Burn Relief. https://www.solarcaine.com/. Accessed November 15, 2017